News - Gluing na ihicha usoro nke PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado igwe
Gluing na ihicha usoro nke na-ekpo ọkụ gbazee nrapado laminating igwe
Ngwongwo na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke PUR na-eji 100% siri ike na-ekpo ọkụ nke na-enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ. Mgbe a kpụchara ya ọkụ n'ime mmiri mmiri, ọ na-adị n'otu ma na-ekpuchi ya mgbe niile n'elu ọrụ iji nweta nzube nke nrapado. . Dịka ihe nhazi dị iche iche, ụdị mkpuchi dị iche iche dị ka ịgbasa, spraying na Rolling, na mkpuchi fiber nwere ike ịhọrọ n'otu n'otu. N'ihi ọrụ dị mfe nke akụrụngwa ahụ, njikọta nke a pụrụ ịdabere na ya na ngwa ngwa, arụmọrụ dị elu, oriri mkpuchi edo edo, oriri obere gluu, enweghị mmetọ na gburugburu ebe obibi, yana nrube isi maka nchebe gburugburu ebe obibi ugbu a, ejirila ya mee akpụkpọ ụkwụ, nkwakọ ngwaahịa, akpụkpọ anụ ngwongwo, igbe akwụkwọ, ngwa ndị ọzọ, na ihe eji arụ ụlọ. , Akụrụngwa egwuregwu, ngwaahịa ịdị ọcha, ihe eji egwuri egwu, ngwa elektrọnik, ngwa eletriki, akpụkpọ anụ, arịa ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahọrọwanye ka akwadoro mmepụta ngwa ọrụ.
Usoro nhicha Na-ekpuchi mkpuchi isi ọma: Mgbe akụrụngwa dị ọkụ, hichaa ya gauze.
Igwe nhicha ahụ: hichaa igwe anaghị agba nchara na gauze dị ọcha tinye na 75% mmanya, ọ bụrụ na gluu dị n'elu, jiri gauze kpọrọ nkụ tinye na 1620 ihe mgbaze / ethyl acetate ihe mgbaze ihicha;
Agaghị ejikwa ihe ndị na-emepụta ihe na-eme ka ihe nkedo dị na roba ahụ ghara ime ya, ka ọ ghara imebi ihe na-agba roba, a ga-ewepụ ya na nrapado ọgwụgwọ dị ike.
Elu nke akụrụngwa; usoro nhicha: jiri gauze dị ọcha tinye 75% mmanya iji kpochapụ.
Gbanwee ogbe nhicha: Hichaa igbe gluu na sooks nke PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado mkpuchi laminating igwe (ọdabara na-agbanwe agbanwe gluu nlereanya na mkpuchi usoro): Mgbe ịtọhapụsịrị nke mbụ ahụ, tinye ihe ọhụrụ gluu 2 ~ 3Kg, ma kpoo ya ruo mgbe ọ zuru ezu. gbazee. Efu, tinyezie eriri ọhụrụ, mgbe agbazere kpamkpam, kpochapu ma ọ dịkarịa ala 1Kg iji malite mmepụta mmepụta.
Mkpuchi mma isi ihicha (ọdabara na-agbanwe agbanwe mama nlereanya na mkpuchi usoro): Mgbe akụrụngwa na-ewe iwe, jiri akọrọ gauze na-ehichapụ.
Roller na mkpuchi onyinye ọnọdụ: Jiri ọcha akọrọ gauze ihichapụ ájá n'elu. Ọ bụrụ na achọtara gluu n’elu, ejila ihe mgbaze organic iji zere mmebi nke ala roba. Jiri ntụtụ gwọọ dị ike wepu ya.
Na-ehicha ihe corona: Mgbe ị kwusịrị na agbanyụrụ ike ahụ, hichaa ya gauze dị ọcha tinye na 75% mmanya.
Achọpụtaghị igwe nhicha nke ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ: a ga-ekpocha isi mkpuchi PUR na-agbaze agbaze akwa akwa laminating igwe mgbe usoro mkpuchi na ụdị ọkwa dị larịị gbanwere, a ga-ewepụ isi mkpuchi ahụ tupu gluu ahụ sie ike . , Jiri gauze akọrọ tinye n'ime ihe mgbaze iji hichaa isi ahụ. Mgbe akụrụngwa ahụ mechiri n'oge arụ ọrụ, a ga-ehichapụ gluu nke gafere na gauze dị ọcha mgbe akụrụngwa gbanyere. Hichaa nza ihuenyo nhicha nke PUR na-agbaze agbaze nrapado mkpuchi na igwe laminating maka ọkara ọnwa. Nhicha ihuenyo nyocha nke mkpuchi isi nke PUR na-agbaze agbaze nrapado mkpuchi laminating igwe.
Akwụsịla mmepụta ihe maka ihe karịrị otu ọnwa, na akụrụngwa mkpuchi niile ga-ehicha dị ka ọdịnaya na ihe ndị achọrọ nke dị n'elu kwa ụbọchị, tupu na mgbe ngbanwe ogbe, ọkara ọnwa na enweghị nhicha usoro okirikiri tupu etinye ya n'ọrụ; maka PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado mkpuchi laminating igwe gluu Mgbe ị bupụsịrị ihe mbụ ahụ, gbakwunye ihe dịka 30Kg nke mmanụ ịnweta ọcha iji gbazee ihe fọdụrụ. Mgbe ị tọpụsịrị, tinye ihe dị ka 30Kg nke mmanụ ịnweta ọcha ka ọ gbasaa ọzọ, ma chere ka eji ya mgbe emechara ya kpamkpam.
Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo, Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Hot gbazee gluu Ngwa,